China LEDL500 Fivarotana mafana LED hazavana miasa amin'ny alàlan'ny finday ho an'ireo mpamokatra sy mpamatsy hopitaly | Wanyu
Fivarotana mafana LEDL500 LED hazavana azo ampiasaina ho an'ny hopitaly
Ny jiro miasa LED500 dia misy amin'ny fomba telo, valindrihana valindrihana, finday ary rindrina nitaingina.
LEDL500 dia manondro ny hazavana miasa amin'ny finday.
Ny fonenana firaka aliminioma vaovao dia misy takamoa Osram 54 amin'ny loko mavo sy fotsy. Ny takamoa tsirairay dia misy masolavitra tsy miankina. Ity hazavana miasa amin'ny finday ity dia manome hazavana azo ovaina avy amin'ny 40.000 ka hatramin'ny 120,000lux, ny maripana miloko manodidina ny 4000K sy CRI mihoatra ny 90 Ra. Ny tontonana fandidiana dia ny LCD Touch Screen. Ny famonoana famonoana otrikaretina dia mahatohitra ny maripana avo sy ny tsindry ambony. Misy safidy roa ho an'ny sandry lohataona, mety ho an'ny olona manana teti-bola samihafa.
■ Fandidiana fo / lalan-dra / Thoracis
1. Fandroahana hafanana mahomby
Fonenana maivana amin'ny alàlan'ny alimina-alimina alimina sy alim-pandrefesana alimina matevina dia mamela ny fandroahana hafanana mahomby, izay manalava ny androm-piainan'ny jiro LED.
2. Mora manitsy ny toerana
Ankoatra ny sisin'ny jiro miasa amin'ny finday dia azonao atao ihany koa ny mitazona ny tahony hanamboarana ny hazavan'ny fanadinana amin'ny toerana ilainao.
3. Tanana roa famonoana otrikaretina
Manome tahony roa ho an'ny mpampiasa izahay, ny iray hampiasaina ary ny iray ho an'ny tahiry. Azo esorina amin'ny famonoana otrikaretina izy io.
4. Rafitra Back-up Battery
Ny bateria dia voafantina amin'ireo marika iraisam-pirenena fanta-daza, miaraka amin'ny tatitra fanombanana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomasina, azo antoka sy azo antoka. Raha sendra tsy fahombiazan'ny herinaratra dia afaka manohana ny fampiasana ara-dalàna 4 ora izy io
5. Fanitsiana midadasika
Ny sandry lohataona dia azo ahitsy miakatra amin'ny 30 degre, ny mpitazona jiro dia farafahakeliny 1,1 metatra ambonin'ny tany ary ny avo indrindra dia 2.1 metatra.
6. Casters mahazaka akanjo
Castors efatra eo amin'ny fototra. Ny roa dia mora mihetsika sy mametraka tsara toerana. Ny roa amin'izy ireo dia afaka mihetsika malalaka, ny roa hafa dia azohidiana amin'ny frein.
7. Panel fanaraha-maso LCD tsy voatery
Ho an'ny hazavana miasa amin'ny finday mitsangana, ny fanaingoana mahazatra anay dia tontonana fanaraha-maso karazana bokotra, izay afaka manitsy ny fahazavana ihany. Fa raha te hanatsara ny fampisehoana LCD ianao izay afaka manitsy ny mari-pana amin'ny loko sy ny fandikana ny loko, dia azo atao ihany koa.
Jiro miasa finday LEDL500
Previous: LEDL260 CE nankatoavina karazana jiro fitiliana fandidiana fandidiana ho an'ny toeram-pitsaboana biby
Manaraka: LEDL620 LED finday alokaloka tsy misy alokaloka miaraka amin'ny vidiny mifaninana
LEDL620 LED Mobile tsy misy alokaloka Operation Light ...